IWUMD Nay Pyi Taw – စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်)
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန (နေပြည်တော်)
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၏ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးပစ္စည်းျမားဝယ်ယဴရန် အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ
ချောင်းဆုံမြို့နယ်တွင် တန်ဖိုးမြင့် ကသမျှင်ငါး အမ တစ်ကောင် ဖမ်းဆီးရမိ
မွန်ပြည်နယ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ငါး/ပုစွန် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမြင့်မားစေရေးအတွက် ဒေသအတွင်း အတန်းလိုက် တင်ဒါပိုက်ချက်များ ချထားပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ လုပ်ငန်း ရာသီတွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်း ငါးဖမ်းဆီးသူ လုပ်ငန်းရှင်များသို့ တင်ဒါပိုက်ချက်...
ပျဉ်းမနားမြို့နယ် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား GHP ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းဆိုင်ရာ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၉.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည်(၁:၀၀) နာရီတွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ရန်အောင်(၂)ဓမ္မာရုံ၌ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအစုအဖွဲ့အား ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရာ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး...
Industrial Electrical Control Course – IECC (TOT) လျှပ်စစ်မွမ်းမံသင်တန်း
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ပို့ချလျက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချရာတွင် သင်တန်းနည်းပြများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုတိုးတက် လာ စေရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Industrial Electrical Control Course -...
Near Pobba Thiri Township
06722048 | 06725941 | 09250689185 | 09973052023
09442201984 | 09250689185 | 09973052023 (Admin Phone)
Office No. (15),Office No. (36),Office No. (16) (NayPyiTaw)
067-408434, 067-408212, Fax: 067-408049 (မွေးရေကျေးလက်ကဏ္ဍ)
067-410033, 067-410367, Fax: 067-410036 (သမဝါယမကဏ္ဍ)